Guri joogidda iyo xiriirrada xadgudubka leh | Mental Health Foundation
Guri joogidda iyo xiriirrada xadgudubka leh
Dadka ku jira xiriirrada xadgudubka leh, xaaladda fayruska Coronavirus ayaa arrimaha u sii xumayn karta sababo farabadan awgood. Cabsiyaha iyo shakiyada ku xiran fayruska Coronavirus ayaa xadgudub geysteyaasha ku dhalin kara giijisnaan, caro iyo salfudayd ka badan inta caadiga ah oo guri joogiddu waxay keenaysaa in waqti dheeraad ah iyaga keligood lala joogo. Waxay taasi weliba adkayn kartaa in loo baxsado meelo ka deggan, ka saaxiibtinimo badan kana xushmayn badan oo aan ka heli karno badbaado dheeraad ah, taageero dheeraad ah ayna suurogal noogu sii tahay in aad gargaar doonanno.
Waxyaabaha qaarkood ayaa dadkoo dhan caawiya, markaa isku day in aad wadato hawlo caadi kuu ah oo kaa taageera caafimaadka maskaxda iyo jirka. Dibad u bixidda si loo soo lugeeyo ama loo ordo (iyadoo dadka la kala fog yahay) ayaa adiga nafis kaa siin doonta qofka kale waxayna fursad kuu siin kartaa in aad gargaar doonato. Waa in aan sii wadno hababka caadiga ah ee aan adiga iyo wixii carruur ah badbaadada idiinku ilaalinno marka suurogalka ah.
Haddii aad khatar ku dhow dahay, booliiska ama anbalaas ka wac lambarka 999. Haddii aad khatar ku jirto oo aadan telefoonka ku hadli karin, wac 999 ka dibna riix 55. Waxaa wicistaada sidan loogu gudbin doonaa xoogga booliska habboon oo adiga ku caawin doona adigoo aanan hadlin.
Waxaa weliba waxtar yeelan karta in aad:
1. Xiriir kula jirto dadka aad aaminayso
Haddii ay suurogal tahay, isticmaal farsamada tignoloojiyeed (sida telefoonka, iimaylka, ama abb-yada ama barnaamijyada farriimaha la iskugu diro) si aad maalin walba (ama in ka badan) ula xiriirto dadka aad aaminayso, sida saaxiibbada, qoyska, dadka aad wada shaqaysaan ama deriska. Waxay tani kaa caawin doontaa in aad dadka xiriir kula jirto waxayna dembiilaha tusi doontaa in dadka kale ay la socdaan sida aad tahay - oo ay dad kale digniin u diri karaan haddii ay adiga kaa war heli waayaan.
2. Dadka kale soo waraysato
Haddii aad u aragto in ay nabad leedahay, soo warayso deriska nuglan, xubnaha qoyska ama saaxiibbada, si aad waqti u soo joogto meelaha ka durugsan gurigaaga halkaasoo ayna dhici karto in ay kaaga nabad tahay in aad taageero ama gargaar ka doonato. Isticmaalidda adeegga telefoonka Takhtarka Guud ayaa noqon karta hab kaloo aan kula xiriirno dadka kale ee aan gargaar weydiisan karno.
3. Dadka la xiriirto si aad macluumaad iyo taageero uga hesho
Ka sokow talada Dawladda Skotland waxaad weliba adeegsan kartaa khadka caawinta Xadgudubka Guriga iyo Guurka Khasabka ah ee Skotland ee 24 saacadood maalintii furan ee ah 0800 027 1234 ama iimayl u dir [email protected]
Waxaad weliba adeegsan kartaa ururka Scottish Women’s Aid (Caawimada Haweenka Skotland) si aad macluumaad iyo taageero uga hesho. Haddii aad ku nooshahay Wales, ururka Welsh Women’s Aid (Caawimada Haweenka Wales) ayaa diyaar ah oo England gudaheeda ururka Women’s Aid (Caawimada Haweenka) ayaa macluumaad ka bixiya mawduucyada ay ku jiraan guryeynta iyo la macaamilidda booliisku.
Haddii aad si nabad ah u samayn karto, wac khadka caawinta telefoonka lagu bixiyo si aad taageero uga hesho, ama dhanka caafimaadka maskaxda guud ahaan ama gaar ahaan xiriirro dhib kugu ah:
Telefoon bilaash ah 24 saac / 7 maalin Khadka caawinta Rabshadda Guriga ee Qaran, oo uu maamulo ururka Refuge: 0808 2000 247
Khadka caawinta AMINA, loogu talagalay haweenka Muslimiinta ah ee ku kala baahsan Skotland - 0808 801 0301
Khadka Talada Ragga (Men’s Advice Line), loogu talagalay ka badbaadeyaasha xadgudubka guriga ee ragga loo geysto – 0808 801 0327
The Mix, macluumaad iyo taageero bilaash ah oo loogu talagalay dadka ka yar 25 jir ee Ingiriiska jooga – 0808 808 4994
Khadka caawinta Xadgudubka Guriga ee kooxaha LGBT+ ee Qaran – 0800 999 5428
Khadadka talada ururka Xuquuqda Haweenka (Rights of Women), adeegyo kaladuwan ayaa diyaar ah